Niverina tany Tahiti tamin'ny taona 2020 ny Princess Cruises
Home » Vaovao momba ny indostrian'ny cruise » Niverina tany Tahiti tamin'ny taona 2020 ny Princess Cruises
Amin'ny taona 2020, ny vahiny Princess Cruises dia hankafy ny toe-tsaina tia mandray sy ireo nosy mahafinaritra any Polinezia frantsay rehefa miverina any Tahiti ny sambo fitsangantsanganana miaraka amin'ny Princess Pacific akaiky, izay manolotra andian-tsambo fitsangantsanganana an-tongotra sambany hatramin'ny taona 2015. Tahiti sy Polynesia frantsay dia misokatra ho an'ny amidy amin'ny 17 aprily 2019.
Hitan'ny vahiny ny harena sarobidy mbola tsy misy fotony miaraka amoron-dranomasina manjelanjelatra sy morontsiraka fotsifotsy azo zahana amin'ny fiaingan'ny Tahiti (Papeete) mandritra ny folo andro sy Polynesia frantsay, izay mandeha sambo avy any Tahiti (Papeete). Ny fitsangatsanganana rehetra dia misy antso alina ao Papeete renivohitr'i Tahiti sy Bora Bora tantaram-pitiavana, ary koa fijanonan'ny alina any Raiatea. Ny seranana fanampiny dia misy an'i Huahine, Rangiroa, ary Moorea. Ny fialan-tsasatra fitsangantsanganana dia manomboka amin'ny 10, 5, 15 ary ny 25 sy 4 Novambra 14 manomboka amin'ny $ 2020.
"Tahiti sy Polynesia frantsay dia mitaona ny mpandeha eran'izao tontolo izao mitady paradisa madio, snorkeling, fialamboly ary fialan-tsasatra", hoy ny filoham-pirenen'i Jan Swartz Princess Cruises. "Amin'ny fiverenanay any Tahiti amin'ny taona 2020, ny Princess Cruises dia manolotra fomba tsara indrindra hijerena an'io fiainana lavitra any an-tsambo mitaingina ilay Princess Pacific akaiky antsika."
Ny sambo kely mitsangantsangana eny amin'ny Pacific Princess miaraka amina vahiny 670 fotsiny dia manome ny hakantony tsy tapaka, ny sonia Princess Cruises, ny serivisy fandraisana olona mafana ary ny fifaneraserana manokana izay hitan'ny vahiny hatrany rehefa mandeha sambo amin'ireo hafa izay mitovy fatratra amin'ny dia izy ireo.
"Princess Cruises dia manana tantara lava amin'i Tahiti ary mpiara-miasa sarobidy mampiseho ny fahasamihafan'ny nosintsika, ny kolontsaina tena misy eo an-toerana ary ny traikefa maro karazana miandry ny fahitana azy," hoy i Paul Sloan, Tahiti Tourisme, Directeur Général ary CEO . "Miandrandra fatratra ny taona ho avy izahay ary mandray ny Princess Pacific hiverina any amin'ny Nosy Tahiti."
Miaraka amin'ny dia lavitra efatra an'ny Grand Adventure & Crossings, Pacific Princess koa dia manolotra sambo lava kokoa hahitan'ny vahiny izany Aloha fanahin'ny Nosy Hawaii na mahita ny harena any Amerika atsimo, ao anatin'izany ny Nosy Paka miaraka amin'ny Moai mistery. Fitsangatsanganana an-tsambo Hawaii sy Tahiti Grand Adventure 19- na 29 andro dia hiala ao Vancouver 16 septambra 2020 ary Tahiti, Amerika atsimo sy Panama Canal Crossing miisa 25 na 35 andro dia hiala an'i Tahiti amin'ny 14 na 24 novambra 2020.